Shirka Madaxda Dowlada iyo M/Goboleedyada oo maalintii 2-aad galay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Shirka Madaxda Dowlada iyo M/Goboleedyada oo maalintii 2-aad galay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 4th April 2021
Shir u dheexeya Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada oo shalay ka furmay Teendhada Afisyooni ayaa Maanta galay maalintii labaad, waxaana Shirka labaad uu furmay goor dhaweyd.
Shirkaan oo ay soo qaban-qaabisay Beesha Caalamka ayaa waxaa looga hadlayaa Ajendayaasha Shirka Wadatashiga doorashada dalka Soomaaliya ka dhaceysa oo Madaxda ay isku fahmi la’yihiin in muddo ah.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta, dhamaan Madaxda maamul Goboleeydada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka qeyb galaya Shirka socda.
Shirka maanta ayaa waxaa yahay in la guda galo ajandaha shirka soo socda in dhinacyada isku afgartaan, sida qorshuhu yahay waxaa la filayaa in la soo saaro war murtiyeedka Ajandaha shirka soo socda xilliga la qabanayo iyo maalmaha uu socon doono waa haddii la isku fahmo.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in shalay Madaxda ay siweyn dood ku aadan Ajendayaasha shirka soo socda ay dhexmartay, in kastoo la tilmaamay in uusan jirin wax horumar ah oo Madaxda ay wada gaareen.
Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ayaa waxaa cadaadis xoogan uu uga imaanayaa Beesha Caalamka oo dooneysa in Madaxda Soomaalida ay heshiis rasmi ah ka gaaraan doorashada iyo khilaafka ka taagan.